१४ जिल्लामा हतियारसहित विप्लवका लडाकु !
विशेष - रिपोर्ट , सुरक्षा , राजनीति
१४ जिल्लामा हतियारसहित विप्लवका लडाकु ! विप्लव समूह रक्षात्मक, सुरक्षा निकायकाे सर्च अभियान
पासाङ्ग ठकुल्ला बिहिवार, जेठ २३, २०७६, १३:३५:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । केही जिल्लामा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका लडाकुको शंकास्पद गतिविधि देखिएको सुरक्षा निकायले बताएको छ । नेपाल प्रहरी स्रोतका अनुसार १४ जिल्लामा विप्लवका लडाकु दस्ता हतियारसहित देखिएका छन् । सुरक्षा निकायलाई प्राप्त ‘इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट’ अनुसार पहाडी र चुरे क्षेत्रसँग जोडिएका जिल्लामा विप्लव समूहका लडाकु देखिएका हुन् ।
रातको समयमा सुरक्षाकर्मीको सहज उपस्थिति नभएका इलाकाहरुमा उनीहरु हतियारसहित देखा परेको बताइएको छ । एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘‘विप्लव समूहको हतियासहितको गतिविधि बढेको सूचनापछि जनशक्ति बढाएका छौं । शंस्कापद स्थानमा छापा, जंगलमा सर्च अभियान पनि चलाएका छौं ।’’
विप्लव समूह रक्षात्मक
‘विप्लव’ समूहका गतिविधि पछिल्लो समय रक्षात्मक देखिएका छन् । पछिल्ला गतिविधि असफल हुँदै गएपछि विप्लव समूह रक्षात्मक बन्दै गएको देखिएको हो ।
सरकारले गत फागुनमा विप्लव समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध गलाएको थियो । त्यसयता सो समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पक्राउ पर्ने र पार्टी परित्याग गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ । प्रतिबन्धपछि भूमिगत शैलीमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको विप्लव समूहले पार्टी छाडेकालाई धमाधम कारबाही गर्दै रक्षात्मक रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको हो ।
यसले विप्लव समुहलाई आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न अफ्ठारो बन्दै गएपछि सो समूहका नेता कार्यकर्ता रक्षात्मकबाटोमा उभिएका हुन् । केही दिनअघि नेपाल बन्द गराउने क्रममा बम विस्फोटमा परी आफ्नै कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । केही नेता कार्यकर्ता विस्पोटक पदार्थ सहित पक्राउ समेत परेका थिए ।
यस घटनाले रक्षात्मकबाटोमा अघिबढ्नु पर्ने विषयमा नेता कार्यकर्ताले समूहभित्र बृहत् छलफल गरेर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाइरहेका छन् । केही सदस्य सरकारसँग वार्ता गर्दा आत्मसमर्पणको सन्देश जाने भन्दै तत्काल त्यसतर्फ अघि नबढ्ने पक्षमा रहेको समेत बताईएको छ ।
विप्लव समूहका पोलिटब्यूरो सदस्य पदम राई केही दिन पहिले सो समूह परित्याग गर्दै सत्तारुढ दल नेकपामा प्रवेश गरेका छन् । तरपछि विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले एक विज्ञाप्ति जारी गर्दै उनलाई निलम्बन गरेको दाबी गरे । ‘पार्टीविरुद्ध झन्झन् अन्तरध्वंस र अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्न भएकाले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर विप्लव समूहका एक पोलिटब्यूरो सदस्यका अनुसार राईले नेता तथा कार्यकर्ताहरु पक्राउ पर्ने क्रम बढेपछि सरकारसँग आफ्ना माग स्पष्ट राख्नु पर्ने तर्क गर्दा निलम्बनमा परेका हुन् । ती नेताका अनुसार अहिले यस विषयमा पार्टी भित्र कुरा राख्ने वतारवण बनेको छैन ।
आइतबार राती सो समुहका कार्यकर्ताले सोलुखुम्बु, महाकुलुङ गाउँपालिका– ३ स्थित छेस्काम प्रहरी चौकी कब्जा प्रयास गरेको समाचार बाहिर आएका छन् । सोमबार प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सोलुखुम्बुमा प्रहरीचौकीमा आक्रमण प्रयास नभएको दाबी गरे । उनले उक्त घटना नियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण प्रचारबाजी मात्र भएको उल्लेख गरे । उनले सुरक्षा निकायमाथि आत्रमण गर्ने आफ्नो नीति नभएको स्पष्ट समेत पारेको छ ।
यद्यी सो समूहका अधिकंस नेता कार्यकर्ताहरु वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधन गरिनु पर्ने पक्षमा छन् । यता सरकारले पनि सो समूहसँग वार्तागर्न पहल गरिरहेको छ । महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका स्थायी कमिटी सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली, पोलिटब्युरो सदस्य भरत बम, मोहन कार्की, केन्द्रीय सदस्यद्वय बन्धु चन्द र विजय श्रेष्ठलगायत करिब साढे चारसय नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् ।
पक्राउपरेका ६ दर्जनभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताले सो समूह परित्याग गरि सत्तारुढ नेकपा र अन्य पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । यसैगरी, करिब दुई दर्जन जति नेता कार्यकर्ताले विज्ञप्ति निकालेरै स्वतन्त्र रूपमा रहेको जनाएका छन् भने केहीले प्रहरीले पक्राउ गरेपछि आत्मसमर्पण गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार प्रतिबन्धयता पक्राउ परेकामध्ये ७१ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ । केही जनामाथि अनुसन्धान प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिबन्धपछि आफैंले बोकेको बम विस्फोटको घटनामा परी विप्लवका चार जना नेता कार्यकर्ताको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन् । त्यसबाहेक भोजपुरमा अर्का एक जनाको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले प्रतिबन्धपछि १८ वटा बम विस्फोटका घटना भएको जनाएको छ । यस्तै, ९५ वटा बमलाई निष्क्रिय पारिएको प्रहरीको तथ्यांक छ । यस्तै यसबीचमा १० स्थानमा तोडफोड तथा आगजनीका घटना भएको प्रहरीले बताएको छ ।
विप्लवविरुद्ध यतिबेला सरकारी संयन्त्रसमेत आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई अमानवीय शक्ति भन्दै आइरहेका छन् भने विध्वंशात्मक र हिंसात्मक बाटो लिनेलाई सरकारले छुट नदिने बताउँदै आएका छन् ।
विप्लव समूहले सञ्चालन गरेका पछिल्ला गतिविधि असफल भएपछि देशभर नेतृत्वको जिम्मेवारीमा परिवर्तन गरेको छ । केही दिनअघि नेपाल बन्दको पूर्वतयारीका क्रममा आफ्ना सैन्य कमान्डरसहितका नेताको मृत्यु भएपछि समूहले मध्यकमान्ड नेतृत्वको जिम्मेवारी प्रकाण्डलाई नै दिएको छ । त्यसअघि मध्यकमान्डको नेतृत्व हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ ले सम्हालेका थिए । केही समयअघी उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
अहिले समूहको काठमाडौं उपत्यकाको जिम्मेवारी माइला लामाले सम्हाल्दै आएका छन् भने काठमाडौं इन्चार्जमा भृकुटी उपनामले चिनिने धिरिन्द्रा उपाध्याय छिन् । काठमाडौंमा हुने सबै योजना लामाकै निर्देशनमा हुने गरेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ । लामा तत्कालीन माओवादीको जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष समेत हुन् । उपाध्याय भने तत्कालीन माओवादीको कोटामा कालिकोटबाट समानुपातिक सभाषद्समेत हुन् ।
विप्लव समूहका तीनवटा मात्रै भनिएको कमान्ड संरचना चारवटा बनाइएको छ । एक नेताका अनुसार चारवटै कमान्डको इन्जार्जसमेत हालौमात्र फेरबदल गरिएको छ । पूर्वी कमान्डको जिम्मेवारी सन्तोष बुढामगरलाई दिइएको छ । यसअघि पूर्वी कमान्ड इन्जार्ज अनिल शर्मा थिए । यस्तै मध्यकमान्डको जिम्मेवारी खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई दिइएको छ ।
मध्यकमान्ड इन्जार्ज हेमन्तप्रकाश वली पक्राउ परेपछि विश्वकर्मालाई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको हो । लुम्बिनी, धौलागिरी र गण्डकी कमान्डको इन्जार्जमा विप्लवकै ठूलो दाइ चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरधन’ र कर्णाली, भेरी, राप्ती र सुदूरपश्चिम कमान्डको जिम्मेवारी धर्मेन्द्र बास्तोलालाई दिइएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले युद्धकालीन समयमा बनाएको पार्टी संरचनाअनुसार नै विप्लव समूह अगाडि बढेको बताइएको छ ।
प्रहरी अधिकारीका अनुसार विप्लव लगायतका सबै शीर्ष नेता भूमिगत छन् । यसअघि गाउँमा रहेका नेता–कार्यकर्ता सुरक्षा कारवाहीबाट बाच्नका लागि विकट ग्रामीण इलाका, चुरे पहाडको क्षेत्र र जंगलमा लुक्न थालेका छन् । पार्टीका बैठक, भेला र प्रशिक्षण पनि जंगलमै हुने गरेको छ । एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘‘प्रहरीले विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ताको कल डिटेल, लोकेसनलगायत कुरा हेर्न थालेपछि शीर्ष नेताहरुले मोबाइल प्रयोग गर्न छाडेका छन् भने तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ताले मोबाइल सेट र सिमकार्ड फेर्न थालेका छन् ।’’
लगानी सम्मेलन र विप्लव आन्दोलनः विदेशीहरुले नेपालमा गर्लान् त लगानी ? बिहिवार, चैत्र १४, २०७५, १७:११:००
संसदबाट बिदा लिएर एसईईको तयारीमा शान्ता चौधरी हामी कानुन बनाउने ठाउँमा छौ । कानुन बनाउछौँ । हामीले कानुन बनाउने हो । कानुन बनाउदा हामीसँग शिक्षा छैन । कानुनी कुरा बैद्धिक स्तरबाट हुन्छ । देशको लागि कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेको मान्छे । पढाइ नहुदाँका समस्या मैले भोगेको छ । नपढेका मानिसले केही गर्न सक्दैनन भन्ने होइन । पढ्दा सहज हुन्छ । संविधान पढने कुरा हरु संविधानका बुधाहरुमा के छन भन्ने कानुनका कुराहरु पढन् पर्ने हुदा पढाइ सुरु गरेकी हुँ । मंगलवार, चैत्र ५, २०७५, १६:३८:००